विश्वभर आठ अर्ब डलर सहयोग संकलन, एक सय ५० देशमा राहत बाँड्ने एउटै व्यक्ति ‘ज्याक मा’ – Koshidaily
मुख्य पृष्ठप्रविधिविश्वभर आठ अर्ब डलर सहयोग संकलन, एक सय ५० देशमा राहत बाँड्ने एउटै व्यक्ति ‘ज्याक मा’
विश्व कोरोना भाइरसको चरम संकटमा रहेका वेला आर्थिक सहयोग गर्ने मानिसहरू पनि उत्तिकै रहेका छन् ।चीनका धनाढ्य एवं अलिबाबा ग्रुपका संस्थापक ज्याक माले महामारीकै बीचमा ट्विटर अकाउन्ट खोलेका थिए । पहिलो ट्विटमै उनले महामारीविरुद्ध विश्व एकजुट हुन आग्रह गर्दै राहत वितरण सुरु गरेको सार्वजनिक गरेका थिए ।
‘एक विश्व एक लडाइँ’ भन्दै ज्याक मा संस्थापक अलिबाबा ग्रुपले मुख्य रूपमा गरिब मुलुकमा सोझै अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री पठाइरहेको छ । अहिलेसम्म विश्वका एक सय ५० भन्दा बढी देशमा १४ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग अलिबाबा ग्रुपले गरेको छ ।
यद्यपि ज्याक माले गरिरहेको यो सहयोगबीच उनको विपक्षमा आलोचना गर्नेहरूको पनि कमी छैन । महामारीको वेला विश्वभरि राहत प्रदान गरिरहेका निजी परोपकार दाताहरूको तथ्यांक संकलन गरिरहेको वाचडग ‘क्यान्डिड’ले अलिबाबालाई १२औँ नम्बरमा राखेको छ ।
सबैभन्दा बढी रकम दान गर्नेमा पहिलो नम्बरमा ट्विटरका संस्थापक ज्याक डोर्सी रहेका छन् । उनले करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर दान गरेका हुन् । हुन त यतिवेला पैसाभन्दा पनि बढी महत्व राख्ने कुरा मेडिकल साम्रगी देखिएको छ । अलिबाबा ग्रुपले १२ करोडभन्दा बढी थान मास्क राहत प्रदान गरेको छ भने ४१ लाखभन्दा बढी थान परीक्षण किट वितरण गरेको छ । त्यस्तै तीन हजारभन्दा बढी भेन्टिलेटर विभिन्न देशमा प्रदान गरेको छ ।
भेन्टिलेटर, मास्क, सुरक्षा सामग्रीलगायत अत्यावश्यक रहेको देशमा सोझै आफ्ना विमानमार्फत पठाइरहेका कारण ज्याक माको राहतले उल्लेख्यता पाएको छ ।मार्चको सुरुदेखि नै अलिबाबा ग्रुपले विमानमार्फत मेडिकल सुविधाको अभाव एवं कमी रहेका धेरैजसो मुलुकमा राहत पुऱ्याइरहेको छ ।
क्यान्डिडका अनुसार ट्विटरका संस्थापकपछि वित्तीय दान गर्नेमा गुगल कम्पनी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । गुगलले ९० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरिसकेको छ । त्यस्तै, तेस्रो नम्बरमा चीनको इन्टरनेट कम्पनी बाइट डान्स रहेको छ । बाइट डान्सले करिब ४१ करोड अमेरिकी डलरबराबरको राहत एवं दान गरेको छ ।
माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सको संस्था ‘बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स संस्था’ले करिब २६ करोड अमेरिकी डलर दान गरेको छ । त्यस्तै फेसबुकले करिब १२ करोड अमेरिकी डलर दान गरेको छ । फेसबुक १५औँ स्थानमा रहेको छ ।
विश्वकै धनाढ्य व्यक्ति ज्याकमा २३औँ नम्बरमा रहेका छन् । उनले करिब १० करोड अमेरिकी डलर दान गरेका छन् । नेटफ्लिक्स कम्पनीले पनि १० करोड अमेरिकी डलर दान गरेको छ ।
क्यान्डिडले विश्वका पाँच सय ४५ दाताहरूबाट अहिलेसम्म विश्वभर करिब आठ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक सहयोग जुटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।संकलन गरिएको रकमबाट विभिन्न बहुराष्ट्रिय परोपकारसम्बन्धी संस्थाहरूले राहत वितरण गरिरहेका छन् ।
पृथ्वी नजिक आउन लागेको छुद्र ग्रह कति हानिकारक ?
कसैले तपाईंको फेसबुक चलाएको त छैन? शंका लागे यो यहाँ फोन गर्नुहोस्
महावीर पुनद्वारा ‘मीना’ रोबोट बनाउने घोषणा